रत्नपार्कमा भेटिएकी ती युवती, जाने हो भन्दै यसरी अंगालिइन्… « Ok Janata Newsportal
रत्नपार्कमा भेटिएकी ती युवती, जाने हो भन्दै यसरी अंगालिइन्…
काठमाडौं । पहिलो पटक काठमाडौं आउनुभएको हो ? पक्कै त्यो ठाउँ तपाईंका लागि नयाँ र अनौठो लाग्नसक्छ । तर, नआत्तिनु होला त्यहाँको जनजीवन प्रायः सधैँजसो त्यस्तै बित्ने गर्दछ ।
काठमाडौं भित्रिएपछि जो कोही पनि एकपटक पुग्ने स्थान रत्नपार्क । त्यहाँको व्यस्त जीवनशैली, अपत्यारिलो माहोल र ध्वनी प्रदुषणले एकपटक त रनभुल्ल पार्ने । मानिस आ–आफ्नो भेषमा निकै दौडिएका छन् । कसलाई कहाँ पुग्नुछ थाहा छैन ।
कोही कसैसँग बोल्दैनन् । आफ्नै व्यस्त शैलीमा नतमस्तक हुन्छन् । रत्नपार्क यसकारणले पनि बढी प्रचलित रह्यो त्यहाँ अःनैतिक क्रियाकलाप पनि हुन्छ रे । बाहिर भनिएजस्तो त्यस क्षेत्रमा खुलेआम यौःनधःन्दा भने हुने होइन ।
त्यहाँ भेटिने थुप्रै युवती, महिलाका आ–आफ्ना बाध्यता र विवशता छन् । ओकेजनता डटकमको टिमले पनि सोही स्थानमा गएर त्यहाँको वस्तुस्थिति र परिवेशबारे बुझेको थियो ।
त्यतिबेलाको समय करिब साँझको ७ः४५ भइसकेको थियो । त्यहाँ अपरिचित महिलाको आवाज कानमा गुञ्जिन शुरु भयो । जाने हो ? प्रश्न आउँछ । आफ्नै सुरमा हिडेको पैदल यात्री बम्किन्छन्– कहाँ जाने ? यी श्रृङ्खला पहिलो पटक जाने व्यक्तिका लागि पक्कै अनौठा हुन् । तर, त्यहाँ दैनिक यस्तै चलिरहेको हुन्छ ।
मानव जीवनमा यौःन एक महत्वपूर्ण पाटो हो । यसलाई पश्चिमा मुलुकमा सहजै स्वीकार्छन् । हाम्रोजस्तो मुलुकमा अझै यसका केही परिबन्धहरु छन् । मुस्लिम देशमा यसको फरकै कानून छ । जुन स्थानको यहाँ चर्चा गर्दैछौँ (रत्नपार्क), त्यहाँ यौःन तृप्तताको लागि कोही महिला वा युवती गएकी छैनन् । उनीहरुभित्रका बाध्यता निकै फरक छन् ।
कतिपय त पेशेवर नै बनेका छन् । शुरुमा काठमाडौं आउँदा उनीहरु विभिन्न बाहानामा यो पेशामा पुगे अहिले उनीहरुको जिउने आधार नै यौःन भइदिएको छ ।
पहिलो पटक काठमाडौं आउनुभएको हो ? पक्कै त्यो ठाउँ तपाईंका लागि नयाँ र अनौठो लाग्नसक्छ । तर, नआत्तिनु होला त्यहाँको जनजीवन प्रायः सधैँजसो त्यस्तै बित्ने गर्दछ ।
कतिपय त पेशेवर नै बनेका छन् । शुरुमा काठमाडौं आउँदा उनीहरु विभिन्न बाहानामा यो पेशामा पुगे अहिले उनीहरुको जिउने आधार नै यौःन भइदिएको छ । बाँकी बिस्तृतमा…